रवीन्द्रले आँखा लगाएको प्रकाशमानको निर्वाचन क्षेत्र :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
चाक्सीबारी नेपाली राजनीतिको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण ठेगाना हो, जहाँ गणेशमान सिंहको घर छ। कैंयन वर्षदेखि सिंह परिवार क्षेत्रपाटीस्थित त्यही घरमा बस्दै आएको छ।
२०४६ साल माघ ५ गते सिंहको त्यही घरबाट पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध जनआन्दोलन गर्ने घोषणा भएको थियो। गणेशमानका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह अहिले पनि त्यही घरमा बस्छन्।
२०४७ सालमा बहुदल आएदेखिनै नेवार बहुल चाक्सीबारी सिंह परिवारको राजनीतिका लागि अनुकूल रहेन।
२०४८ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ बाट गणेशमानकी श्रीमती मंगलादेवी र छोरा प्रकाशमान प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठेका थिए तर, दुवैले हारे। ०५१ सालमा पनि प्रकाश नेवार बहुल क्षेत्र नम्बर ३ बाट लडे।
सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नपाएपछि उनी २०५६ सालको निर्वाचनमा उठेनन्। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद बने। ०६४ सालमा नेवार बहुल क्षेत्र छोडेर उनी क्षेत्री-बाहुनको बाहुल्य रहेको क्षेत्र नम्बर १ बाट उठे। नयाँ बानेश्वर, थापाथली, बबरमहल आसपासका क्षेत्र समेटिएको नम्बर १ मा कांग्रेस अत्यन्त बलियो मानिन्छ।
महानगरका जम्मा ४ वडा रहेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रकाशमानले लगातार जित्दै आएका छन्। ०६४ सालमा माओवादीको पक्षमा चुनावी लहर चलेर प्रत्यक्ष तर्फ कांग्रेस ३७ सिट र एमाले ३४ सिटमा समेटिएको बेला पनि यो क्षेत्रबाट सिंहले जितेका थिए।
पछिल्लो पटक प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल ठूलो मतअन्तरले सिंहसँग पराजित भएकी थिइन्।
प्रकाशमान यसपालि पनि यही क्षेत्रबाट उठ्ने पक्का छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका एमाले-माओवादीको संयुक्त उम्मेदवार को बन्छ अझै टुंगो छैन।
यता, विवेकशील-साझाका सहसंयोजक तथा पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले पनि यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा उठ्ने घोषणा गरेका छन्।
मिश्रले किन यो क्षेत्रमा सधैं बलियो देखिएका सिंहसँग लड्न रोजे? एमाले-माओवादीको संयुक्त उम्मेदवार यो क्षेत्रमा कति बलियो हुन्छ?
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको तथ्यांकका आधारमा हामी यी प्रश्नहरुको बिश्लेषण गर्नेछौं।
यो क्षेत्रमा काठमाडौंका परम्परागत रैथानेभन्दा पनि बाहिरबाट आएर बसोबास गर्ने मतदाता बढी छन्। यहाँ महानगरका १०, ११,२९ र ३१ गरी जम्मा चार वडा पर्छन्।
गत संविधानसभा निर्वाचनमा सिंहले १५ हजार १ सय ३८ मत ल्याई यहाँबाट विजयी भएका थिए। यहाँ माओवादी उम्मेदवार दाहालले ४ हजार ६४ मत ल्याएकी थिइन् भने एमाले उम्मेदवार उमा शर्माले ३५०१ मत ल्याएकी थिइन्।
यसरी पछिल्लो संविधानसभाको मात्र चुनाव परिणाम हेर्ने हो भने सिंह एमाले र माओवादीका संयुक्त उम्मेदवारभन्दा अझै बलिया देखिन्छन्।
तर काठमाडौं महानगरको पछिल्लो स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने यहाँ फरक तस्वीर आउँछ।
हामीले यहाँका मेयरभन्दा पनि यी वडामा वडाध्यक्षले पाएका मत परिणाम बिश्लेषण गरेका छौं, जुन मतमा पार्टीको प्रभाव बढी प्रतिबिम्वित हुन्छ।
प्रतिस्पर्धा देखिएका अन्य नेताका चुनाव क्षेत्रका विश्लेषण पनि पढ्नुहोस्ः
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा
प्रचण्डले चितवन-३ जित्छन्?
कांग्रेसले यो क्षेत्रका चार वडामा जम्मा ८ हजार ८ सय ४२ मत ल्याएको थियो। यो मत ०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रकाशमानले पाएको मतभन्दा झण्डै आधा हो।
अर्कोतिर एमालेले यी वडामा ८ हजार ७ सय १४ मत ल्याएको छ। यो मत संविधानसभा निर्वाचनमा उसले पाएको मतभन्दा दोब्बर हो। माओवादीका वडाअध्यक्ष उम्मेदवारहरूले यसपालि यहाँ जम्मा १२ सय १२ मत ल्याएका थिए।
माओवादी र एमालेका वडाध्यक्षहरूले पाएको जम्मा मत जोड्दा ९ हजार ९ सय २६ हुन्छ। यो कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा झण्डै एक हजार बढी हो।
पछिल्लो स्थानीय तह र गत संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने, एउटा रोचक तथ्य देखिन्छ। स्थानीय तह र संविधान सभामा एमाले र माओवादी दुवैको मत जोड्दा थोरै मात्र फरक पर्छ।
संविधान सभामा दुवैको जम्मा मत ७ हजार ५ सय ६५ थियो भने स्थानीय निर्वाचनमा दुवै पार्टीका वडाध्यक्षले पाएको मत जोड्दा ९ हजार ९ सय हुन्छ। माओवादीको मत घट्दा एमालेको मत बढेको देखिन्छ। यो क्षेत्रको वामपन्थी मत लगभग ९ हजारको हाराहारीमा देखिन्छ।
यो क्षेत्रको नयाँ खेलाडी विवेकशील-साझा हो। स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्ने हो भने विवेकशील-साझालाई नजोडी यो चुनाव क्षेत्रको विश्लेषण पूरा हुँदैन।
यो निर्वाचन क्षेत्रका वडामा विवेकशील-साझाले उम्मेदवार उठाएनन्, तर मेयर उम्मेदवारले भने धेरै मत ल्याए।
विवेकशील र साझाका मेयर उम्मेदवारले पाएको मत हेरेरनै अहिले एकीकृत भएको यो पार्टीले आफ्ना सहसंयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठाएको छ।
यो क्षेत्रका वडाबाट कांग्रेस मेयर उम्मेदवारले ६ हजार ८ सय, एमाले उम्मेदवारले ८ हजार २ सय ६९ र माओवादीले १ हजार ३ सय १४ मत ल्याएका थिए।
विवेकशील र साझाका मेयरको मत जोड्दा ७ हजार ६ सय ८० पुग्छ। यी दुई पार्टीले स्थानीय चुनावमा एमालेको भन्दा कांग्रेसका मत धेरै काटेको थियो।
यसपालि विवेकशील उम्मेदवार मिश्रले कति भोट ल्याउँछन् भन्ने निर्वाचन परिणाममा भर पर्छ। उनले आफ्ना पार्टीका मेयरले ल्याए जस्तै भोट ल्याए भने त चुनाव जित्ने सम्भावना हुनेछ।
कांग्रेसको भोट धेरै काटे भने प्रकाशमान हार्नेछन्, वामपन्थी उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना रहन्छ।
कांग्रेस र वामपन्थी गठवन्धनबीच मतदाता ध्रुवीकृत भए र मिश्रले थोरै मात्र भोट ल्याए भने प्रकाशमानले नै तेस्रो पटक यो निर्वाचन क्षेत्रमा जित्नेछन्।
अहिलेसम्म उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गरिनसकेकोले मतदाताको मनस्थिति थाहा छैन। जसै चुनावको माहोल बढ्दै जानेछ मतदाताले आफ्नो भोट कसलाई हाल्ने भनेर तय गर्नेछन्। उम्मेदवारी मनोनयनपछि हामी मतदातासँग कुरा गरेर यो क्षेत्रको विश्लेषण फेरि लेख्नेछौं।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २७, २०७४, ०१:३६:३३